Faah faahin Hordhaca kulanka Juventus vs Atletico Madrid lugta labaad wareega 16ka ee Champions League – Walaal24 Newss
Faah faahin Hordhaca kulanka Juventus vs Atletico Madrid lugta labaad wareega 16ka ee Champions League
Atletico Madrid ayaa bartilmaameed u noqon doonta wareega quarter-finalka Champions League marka ay u safreyso Juventus Caawa oo Talaada ah, iyadoo haatan haysata 2-0.
Goolal ka yimid Jose Gimenez iyo Diego Godin ayaa Ateltico ku guuleystay lugtii koowaad ee Wanda Metropoliano todobaadyo ka hor, waxaana ay rajeynayaan inay Juventus mar kale xirto kulankaan.
Laakiin tababare Diego Simeone ayaa ka warqabay shaqada adag ee ay wajahayaan, isagoo yiri: “Juventus (Juventus) waa koox aad u xoogan
Kulanka wuxuu soo galayaa saacada Geeska Afrika marka ay tahay: 11:00 PM oo Caawa ah
ciyaartoyda sare ee boos kasta. Waa inaan isdajino, is-hoosaysannaa oo ogaanno inaanu ciyaareyno koox aad u xoogan.
“Noocyada noocan oo kale ah waxay u qaybsan yihiin laba qeybood, hal gurigooda iyo hal mar, waxaan isku dayi doonnaa inaan ciyaarta ku qabanno jihada aan rabno in aan tagno.”
Tababaraha Juventus Massimiliano Allegri ayaa aaminsan in kooxdiisa ay nasteen lugtii koowaad taasoo keentay inay guul darro soo gaarto, waxaana ay dooneysaa inay soo bandhigto qaab ciyaareed wanaagsan.
Waxa uu yiri: “Lugtii hore waxa ay aheyd qeybtii hore ee fiicneyd, lakiin waxa ay sameeyeen qaladaad aan ku fakareyno inaan ka badbaaday qatarta ka dib markii ay soo garaaceen wareega group-yada, waa inaan tagnaa garoonkeena si aan ula dagaalano iyo taageerada taageerayaasheena.
“Waa inaan siinnaa wax badan oo berrito ah, inaan ka soo baxno dhinaca dareenka ah, oo aan ku fadhiisto waqti adag oo aan siin karno boqolkiiba boqol, si aan garoonka uga soo baxno dhamaadka ciyaarta iyadoo aan wax qoomamo ah.”
Atletico ayaa waxaa ka maqan Thomas Partey oo ganaax ku maqan, halka kabtanka kooxda Godin – oo gool ka dhaliyay lugtii hore – waa shaki weyn.
Juventus ayaa heysta seddex ciyaaryahan oo ka maqnaanaya Sami Khedira, Juan Cuadrado iyo Douglas Costa oo dhamaantood dhaawac ku maqan. Cristiano Ronaldo ayaa ahaa bedel aan la isticmaalin jimcihii waxaana la filayaa inuu ku soo laabto line-upka.
Maamulka Koofur Galbeed oo Gudoomiye cusub u soo magacawday magaalada Marko
Madaxweyne Farmaajo oo dalka dib ugu soo laabtay ka qeybgalkii Shirkii Africa iyo Ruushka kadib
Dowladda Kenya oo sheegtay in ay Ciidamadeedu dileen xubno ka mid ahaa Al-Shabaab
Kooxda Al-shabaab oo qabsatay degaanka Gacan maroodi oo difaac adag ka sameystay
Madaxweyne Farmaajo oo xafiiskiisa ku qaabilay Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya
Sawiro: Taliyeyaasha Ciidamada Asluubta iyo Booliska oo kormeeray Ciidan tababar uu uga socdo dugsiga Gen. Kaahiye
Dhageyso: Gudomiyaha Aqalka Sare oo digniin ka soo saaray baaqashada kalfidhiyada Golaha
Dhageyso: Gudoomiye Mursal oo ka hadlay xariga Muqtaar Roobow iyo xaalada magaalada Beydhabo
Daawo: Xisbiga Wadani oo sheegay in madaxda Soomalind ay la kulman Cabdiraxman Cabdishakuur iyo Sanbalooshe
Daawo: Madaxwene Farmajo “Waa jiraan dad Soomaali oo la adeegsado wey jireen oo shisheeya adeegsado waligoodna wey jireen”
Daawo: Shacabka reer Hargeysa oo su’aala xasaasi ah weydiiyay Wasiirka Arimaha Dibada Dr. Sacad Cali Shire
Daawo: Wakiilka joogtada Jaamacada Carabta ee Soomaliya oo ka warbixinayo shirkii Jaamacada Carabta kana qeybgalay Madaxweynaha JF Soomaliyeed